Nisy ihany koa ny volabe 100 tapitrisa dolara avy amin’ilay orinasa Wisco nitrandraka vy tany Soalala lasan’ny HAT tamin’izany. Ny tetikasa lehibe tahaka ny SE/CNLS Sida sy ny ONN nahazoana vola an-tapitrisany dolara dia lasan’izy ireo avokoa. Manginy fotsiny ny aferana boaderozy sy ny famarotana tanindrazana natomboky ny tetezamita, izay mbola mitohy mandrak’ankehitriny. Izany no nireharehana tao anatin’ny 5 taona, fa hoe afaka niasa na dia fambotriana sy fanaovana tantely afa-drakotra aza no natao. Lasa mpanefoefo avokoa izy ireo saingy tsy nisy nahavita nanangana orinasa ahafahana manome asa ny malagasy tahaka izao ataon’i Marc Ravalomanana amin’ny alalan'ny orinasa tiko AAA izao. I Marc Ravalomanana anefa sady avy sesitany 6 taona, nopotehina ny fananany rehetra, nohenjehina tamina fitsarana mitanila, nogadraina fa tsy nihemotra ary nanao politika mba hanavotany ny fireneny sady manome ary mbola hanome asa ny olona. Ny fitondrana HVM notohanan'ny Mapar tamin'ny fifidianana 2013 moa dia io manenjika sy managadra misesy ny olony io ankehitriny.